Image - ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုဟူသောစကားလုံးများသည်သတင်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ယခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အနာဂတ်တွင်ထပ်မံဖြစ်ပွား ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းယနေ့ဖြစ်ပွားနေသောအရာသည်လူသားတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာနေသည်။
အခြေအနေကအရမ်းလေးနက်တယ်။ ၁၈၈၀ မှ ၂၀၁၂ အထိကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၀.၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်လာသဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံရှိရေခဲပြင်မျက်နှာပြင်ကိုလျော့နည်းစေပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကိုစကားလုံးများ (သို့) အလွန်ဝေးကွာသောအပြုအမူများဟုမကြာခဏမှတ်ယူလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကဖြစ်ပျက်နေသည်။ ညစ်ညမ်းသောဓာတ်ငွေ့များအဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ပြီးတော့ဒါကတကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့လိုတယ်ဆိုရင်၊ Antti Lipponen, ဖင်လန်မိုးလေဝသဌာနမှရူပဗေဒပညာရှင်, ဖန်တီးသည် ကာတွန်းကားချပ်ကိုကြည့်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပူချိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကြည့်နိုင်ပါတယ်.
အစပိုင်းမှာတော့အပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်အရက်ဆိုင်တွေကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာတိုင်းပြည်တစ်ခုစီရဲ့အပူချိန်တိုးလာပြီးသူတို့ဟာအနီစွန်းလာတယ်၊ နောက်ဆုံးအထိ 2016 ခုနှစ်တွင်အရက်ဆိုင်အားလုံးအနီရောင်နှင့်အဝါရောင် - နီဖြစ်ကြ၏.
»ဂရပ်မှရှင်းလင်းစွာထွက်ပေါ်လာသောတိုင်းပြည်မရှိပါ။ ပူနွေးလာမှုသည်ဒေသတွင်းမဟုတ်၊'' Liponnen သို့ပြောသည် ရာသီဥတုဗဟို။ ထို့အပြင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်အစိုးရများအနေဖြင့်ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မမြင့်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်းသဘောတူခဲ့သည်။ ကံမကောင်းတာကပဲရစ်သဘောတူညီချက်ကအကျိုးဆက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ရပါတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ကမ္ဘာမြေသည်ပူနေသည်